Xukuumada Siilaanyo Oo Ku Fashilantay Hirgelinta Qorshe Siyaasadeed Oo Dabar U Noqda Tahriibta | Salaan Media
Xukuumada Siilaanyo Oo Ku Fashilantay Hirgelinta Qorshe Siyaasadeed Oo Dabar U Noqda Tahriibta
May 28, 2013 | Published by: Hamse
Xukuumada Siilaanyo Oo Ku Fashilantay Hirgelinta Qorshe Siyaasadeed Oo Dabar U Noqda Tahriibta, Xalkeedana Ku Soo Koobay Ka-hadalka Dhibaatada Ay Leedahay
May 27, 2013 Hargeysa(SM)- Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo, ayaa u muuqata mid ku fashinlantay hirgelinta qorshe siyaasadeed oo dabar u noqday tahriibta dhalinyarada, waxaanay masuuliyiinteedu inta badan tabashada dhalinyarada ee shaqo la’aanta iyo halista tahriibta kaga fal-celiyaan ka-hadalka dhibaatada ay tahriibtu u leedahay Dhalinyarada iyo Mustaqbalka dalka.
Dhibaatada Tahriibka oo bilihii iyo sannadihii u dambeeyey si xawli ah u soo kordhayey, ayaa saamayn la taaban karo ku yeeshay badi qoysaska Dalka, taas oo sababta ugu weyn lagu tilmaamay shaqo la’aan iyo rejada nolol ka duwan ta dalka taala oo dhalinyaradu ugu haajiraan dalalka Debedda, gaar ahaan Qaaradda Yurub.
Iyada oo inta badan Xukuumadda Somaliland ka hadasho dhibaatada ay arrintani u leedahay Dhalinyarada iyo Mustabalka dalka, waxa si walaac leh shalay uga hadlay caqabadaha ay leedahay, Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Md. Maxamuud Axmed Barre (Garaad) oo sheegay inay tabriibtu dhibaato baaxad leh ku hayso dalka.
Wasiirka oo dorraad Warbaahinta ugu waramay magaalada Hargeysa, waxa uu ka digay halista ay tahriibku hayso Qaran ahaan, isaga oo dhanka kale soo qaatay dhitaabooyin dhalinyaradu kala kulanto tahriibta.
“Dhalinyaradii waxay ku dhamaatay Tahriib, walina way ku socotaa oo dhibaato laxaad leh ayay ku haysaan Dalkan. Waalidiintiina waxa lagu qasbayaa inay Ubadkooda wixii ay hanti hayaan u xaraashaan, markaa qaran ahaan dhib wayn ayay nagu tahay,”ayuu yidhi Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo arrimaha Bulshada Somaliland Md. Maxamuud Axmed Barre (Garaad).
Wasiirku waxa uu sheegay dhibaatooyin dhalinyarada ka soo gaadha tahriibka, waxaanu ku sheegay, “Gaajo, Haraad, Daal badan iyo Jaahwareer oo ay u dheer tahay inay la kulmaan Af-duub layska xidho oo aan la siidaynayn ilaa laga bixinayo Lacagta ay dadka Afduubay Codsadeen la siiyo, waxaana taas dheer iyada oo qofka waxaas oo hawla la kulmay aanu hadana gaadhin meeshi uu hiigsanayay oo tii Allaba ku timaado wax uu korosadayna aanu jirin If iyo Aakhiraba.”
Hadalka Wasiirka, ayaa qayb ka ah weedhaha masuuliyiinta xukuumaddu inta badan kaga hadlaan dhibaatooyinka tahriibtu leedahay, balse aanay kaga hadal xalka dhibaatadan lagaga gudbi karo iyo siyaasadda xukuumadda uga taala xakameynta caqabadaha aasaaska u ah mushkiladda tahriibka oo saamaysay qoysaska Dalka badankooda. Haseyeeshee, xukuumaddu waxa ay todobaadkii hore shaacisay qorsheheer qaran ah oo ay ka qayb-qaadanayaan dhowr wasaaradood kaas oo lagu darsayo caqabadaha ku gedaaman shaqo-abuur laga hirgeliyo dalka.
Warsaxaafadeed ku saxeexan yahay Wasiir Garaad, ayaa shaacisay in xukuumaddu qabanayso Shir heer qaran ah oo lagu faaqidayo hababka ugu habboon ee shaqo abuur looga samayn karo dalka, kaas oo ku qabsoomi doona magaalada Hargeysa.
Wasiirku waxa uu war-saxaafadeedkia ku sheegay in la qaban doono shir Qorshe Qaran ah oo la xidhiidha shaqo abuurka, kaasoo ay qaban qaabinayaan Wasaaradaha Shaqada iyo arimaha Bulshada, Qorshaynta Qaranka, Hay’adda ILO iyo Daladda dhalinyarada ee Sonyo.
Ujeeddada shirkaas ayaa lagu sheegay sidii loo heli lahaa siyaasad cad oo lagu ballaadhinayo baaxadda shaqo ee dalka, isla markaana lagu furdaamin lahaa caqabadaha hor-taagan kobaca shaqo ee dalka si looga gudbo loona yareeyo shaqo la’aanta
War-saxaafadeedka oo aan lagu sheegimn muddada uu shirkaasi qabsoomayo, waxa uu intaa ku daray in shirkan ay barbar socon doonto qabashada Bandhig Carwo ah oo la xidhiidha arrimaha shaqo, adeegyada iyo wax soo saarka.
Dhanka kale, Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa badhtamihii bishan kulan ballaadhan magaalada Hargeysa ku qaatay Ardayda qaar ka mid ah jaamacadaha caasimadda, waxaana ujeeddada kulankaas oo markii hore la sii shaaciyey loo qaatay mid madaxweynuhu ku soo bandhigayo siyaasadda Xukuumaddiisa ee ku wejehan mustaqbalka dhalinyarada oo si weyn uga niyad-jab nolosha wakhtigan dalka Taala.
Haseyeeshee, madaxweynuhu kulankaas kuma soo bandhigin siyaasad cad oo xukuumaddiisu ka leedahay mashaqada tahriibta iyo tallaabooyinka waxqabad ee lagu xallin karo, waxaanu madaxweynuhu kaga hadlay oo kaliya arrimo siyaasadeed oo aan ka tarjumayn baahida ay dhalinyaradu tabayaan ee dhanka shaqo abuurka iyo xal Qaran oo lagaga arrinsado halista tahriibta iyo dabar-go’a ay ku hayso da’ yartii dalka.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Kulmiye waxa loo fadhiyaa isla markaana ay masuuliyadi ka saaran tahay inay maaro-siyaasadeed u raadiso dhibaatada tahriibta ee ka dhalatay shaqo-la’aanta dhalinyaradu tabanayaan, isla markaana la dhiirri-geliyo baraamijyo isugu jira wacyi-gelin iyo shaqo-abuur si dhibaatada tahriibta looga baajiyo da’ yarta dalka ee ku dhammaatay saxaraha iyo Biyaha Badda.